Ndinqwenela Phezu Jackpot - Coinfalls Casino
Ndinqwenela Phezu Jackpot
iintsomi abaziwayo kulo lonke ihlabathi kids ephulaphule le amabali Cinderella, rapunzel, Little Red Riding Hood etc. And building on the popularity of fairy tales there has been numerous slot games based on them. Ke kaloku omnye umdlalo yinto Ndinqwenela Phezu Jackpot. Kodwa lo mdlalo enyanisweni eyodwa xa kuthelekiswa neminye imidlalo ngantsomi themed kuba okunene idibanisa inani kweentsomi ndawonye kunye nomxholo wayo. Ukuze ukwazi okungakumbi ngalo mdlalo umdla, ufunda.
Ndinqwenela Phezu Jackpot yinto yokuzonwabisa slot umdlalo esekhompyutheni Blueprint midlalo kunye 5 namacwecwe kunye 20 paylines. Ukudlala lo slot kuya kufuneka baqale ngokubeka ukubheja kwakho. Ungenza oku lokuveza iTotal Bet thebhu ezantsi kwekhusi. Uyakwazi bet naphi phakathi 20p basonta ukuya ubuninzi £ 200 spin ngamnye kulo mdlalo. Xa sele nithethile ukubheja kwakho, wena arhabaxa esukela iqhosha kwikona lasekunene-lesandla.
Ukuba ufuna uyakwazi ukutshintsha bet qho emva basonta okanye aqhubeke ne fanayo. Kukho ukhetho weemoto basonta ukuba awuyithandi zabetha spin iqhosha emva spin.
Ndinqwenela Phezu Jackpot luphawu kakhulu esisityebi umdlalo. Umdlalo u iibhonasi ezimbini eziphambili nganye kuzo lahlulelene laba zobubele mini-imidlalo.
Lokuqala ukuya unalo bonus Fairy iintsomi leyo izakufunyanwa xa ufika 3 ye iisimboli incwadi aphose i bhobhile 1,3 kwaye 5. Ukuba ukulawula ngempumelelo ukwenza ukuba, uya kuvuzwa ukhetho ukukhetha enye imidlalo mini zilandelayo ukudlala
Rapunzel Free ijija – Aziyeki sesisa yinkosana kubonakala phezu bayotywe 5. Umana wayenyuka nenqaba ukugcina Princess ukuze kwandiswe lingabali yakho. Umdlalo uphela xa Prince lufikelela encotsheni.
Rumpelstiltskin Deal uMenzi – Apha kufuneka ukuba ukhethe enye lijongene abaninzi uYehova kuwe. Unga kwakhona iyakulikhaba ijongene ezifundiswayo kwaye yilindele enye engcono.
Three Little Pigs Free ijija – Aziyeki mahala kunye zasendle ihagu.
UJack kunye Beanstalk – Apha kufuneka ukuba akhethe iimbotyi ukwenza weembotyi zikhule. Ukuba ufikelele phezulu unako ukufumana liseleyo iqanda yegolide.
ngoku, ukuba iimpawu ibhonasi kungasentla ngokwaneleyo, Ndinqwenela Phezu Jackpot ukuchaphazela ngakumbi ukunikela ngohlobo yebhonasi Fairy kumama. Le randomly izakufunyanwa apho ufumana ukhetho kwi khetha nasiphi na omnye 3 zijinge u kutyhila into bonus wena GET ngob.
Usenokuba mhlawumbi ukufumana zasendle okanye enze imiqondiso okanye kufutshane nawe zasendle okanye ukwenza bayotywe zasendle lonke. Nganye kwezi iibhonasi kwakhona ogama emva irytale kwaye ikhonkco inxenye kubo.
Ndinqwenela Phezu Jackpot alithandabuzeki umdlalo Blueprint ngeyona zinyuka midlalo. Ngoko ke, ukufumana intanethi eli omnye itrayi. Yinto yayifanele.
igama: Ndinqwenela Phezu Jackpot
umbhekisi : Blueprint Gaming
Iimpawu ibhonasi: Ewe
aziyeki ezamahala: Ewe